महान जोडी ! जसले बिबाह खर्च कटाएर अ’क्सिजनको लागि गरे यति धेरै रकम सहयोग – Sandesh Press
महान जोडी ! जसले बिबाह खर्च कटाएर अ’क्सिजनको लागि गरे यति धेरै रकम सहयोग
May 14, 2021 567
कोरो-ना म-हा-मारी बिच विवाह गरेका नव विवाहित जोडि दाङको घोराही नवलपुर निवासी अबिनाश राना र सिर्जना राना कवरले आफ्नो बिवाह खर्च कटाइ को-रो-नाको
महा-मा-रिको बेला ओक्सिजन सिलिन्डर नपाएर बि-रा-मी-को उ-प-चा-र-मा स-म-स्या भइरहेको अवस्थामा उक्त जोडिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीलाई 51 हजार रुपैया ओक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि आ’र्थिक सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँहरुको वैवाहिक जिवन हाँसिखुसी सफल तरिकाले बितोस् भनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । याे पनि पढ्नुहाेस् : एकदमै सुन्दरि उतिकै सहनशील अनि मेधावि बोलाईमा स्पष्ट वक्ता अनि उस्तै सुरिलो स्वर ।
यी हुन राउटे समुदायकि सम्झना साहि ।झलक्क हेर्दा सायदै कसैले राउटे भनेर आकलन गर्दो हो । हाल सुर्खेतमा बस्दै आएको र दाङ तर्फ लाग्दैगर्दा बाटोमा भेटेपछि
उनिसग लिइएको अन्तर्बाता आजको यश शृङ्खलामा पेश गर्दैछौ ।राउटेहरु अरु समुदायसग बिवाह गर्दैनन् त्यहि प्रश्न सम्झनालाई सोध्दा हो आफु अन्यत्र समुदायसग
बिवाह नगर्ने र राउटे सगनै गर्ने बताइन,एक ठट्यौलि प्रश्न जो थियो । सायदै तपाईं हामिले यस्ति सुन्दरि राउटे कहिले देखेका नै थियौ ।हेर्दै दाग लाग्लिन जस्ति धपक्क बलेकि उस्तै सजिएकि
अनि मीठो स्वर भएकि यिनी नै पहिलि हुनुपर्छ जो राउटे नै होलिन् भन्न पनि असहज जस्तै हैन अर्कै समुदायको जस्तो देखिने एकदमै राम्रि ।राउटे समुदायकै सान हुन सम्झना ।
यो पनि पढ्नुहोस् स् काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा देखिएको एक ड९र९ला९ग्दो दृश्यले विश्वभरका मानिसहरुको हो९स उ९डाएको छ । अस्ट्रेलियाको तास्मानिया टापूमा अलपत्र
परेका करिब ४७० ह्वे९लमध्ये ३८० को मृ९‘त्यु’ भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अस्ट्रेलियामा अ९ल९पत्र परेर यति ठूलो सङ्ख्यामा ह्वे९ल९हरूको मृ९त्यु भएको
पछिल्ला केही दशक यता यो नै हुनसक्ने बताइएको छ । ती ह्वेलहरू कसरी तटीय क्षेत्रमा अ९लप९त्र९ परे भन्ने कुरा हालसम्म पत्ता लागेको छैन । ह्वेलको यो प्रजाति तटीय
क्षेत्रमा पुगेर अ९ड्कि९ने सम्भा९व९ना बढी हुने बताइन्छ । ह्वेलविज्ञहरूले गत सोमबार तस्मानिया क्षेत्रमा अल९पत्र परेका ह्वेल सम्भवत अन्टार्कटिका जाने
क्र९ममा बाटो वि९राएर पा९नीको सतह कम भएको तटीय क्षेत्रमा फसेका हुनसक्ने बताएका छन् । उद्धार प्रयासका बावजुद् पनि अनुकुल वातावरण न९पाउँँदा तीन दिन भित्रमा
यति धेरै सङ्ख्यामा ह्वेलको मृ९‘त्यु’ भएको छ । बुधवारसम्म उद्धारकर्ताहरूले ५० वटा ह्वेल ब९चा९उन स९फ९ल भएका छन् भने थप ३० लाई ब९चाउ९न उनीहरू लागि परेका छन् ।
तास्मानियाका अधिकारीहरूले ‘प्राणी जी९वित रहेसम्म’ उद्धार कार्य जारी रहने बताएका छन् । “पानीमा जीवितै रहँदासम्म हामीसँग आ९शा९वादी हुने अवस्था रहन्छ ।
तर समय बित्दै जाँदा उनीहरू झन् थ९कि९त हुनेछन्,” तास्मानियाको पार्क र वा९ई९ल्डलाई९फ सर्भिसका क्षेत्रीय प्र९बन्ध९क निक डे९का९ले बताउनुभयो ।
त्यसपपहिले सन् २००९ मा करिब २०० पाइलट ह्वे९ल बलौटे पानीमा फ९से९को फे९ला परेका थिए । तालिमप्राप्त ६० उ९द्धारक९र्ताको एउटा टोलीले गोफनलगायतका विभिन्न उपकरणको सहयोगले
मङ्गलवार बिहानदेखि केही ह्वेललाई कम पानी भएको ठाउँबाट गहिरो पानी भएको ठाउँतिर पु¥याउन सुरु गरेका थिए । तर श९क्ति९शाली छालका कारण उक्त कार्य चु९नौ९तीपूर्ण भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् स् अचेल काठमाडौंको न्यूरोडको एउटा गल्ली यूरोपको जस्तै देखिन थालेको छ। नदेखियोस् पनि कसरी युरोपबाट आएका युवाले ल्याएको योजना न हो ।
नेपालमा पनि विश्वका अरु देशहरुमा झै कोरोनाले सबै व्यवसाय ठप्प बनायो । दैनिक लाखौंको व्यापार हुने न्यूरोड क्षेत्र सुनसान हुन थाल्यो । फुर्सद नपाउने न्यूरोडका व्यापारीहरु
चियाको चुस्कीमा रम्न थाले । अनि कुरा उठ्यो व्यापारको । न्यूरोडको व्यापारलाई पहिलको अवस्थामा फर्काने योजनाले चियामा अझै मिठास थपिदिएको थियो ।
त्यो मिठास थपिएको चियाले ‘अम्रेला स्ट्रीट’को अवधारण दिमागमा ल्यायो । यूरोपतिर गएको बेला देखेको कुरालाई संकटा क्लबका सचिवले चियाको चुस्की सँगै मिठीएको मुखारबिन्दुबाट बाहिर ल्याए । लगतै पैसा संकलन भयो र काम सुरु भयो ।
अहिले दैनिक हजारौ मान्छेले न्युरोडको ‘अम्रेला स्ट्रीट’ फोटो खिचाउने र टिकटक बनाउने गर्छन्। फुर्सदिला र घुम्न रुचाउने मान्छेका लाटि किम्ती भएको छ न्युरोड । सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीको रजतपट विभिन्न कारणसहित विवादमा छाइरहन्छ । पछिल्लो पटक भने यसमा नायिका स्वस्तिमा खड्का तानिएकी छिन् ।
Prevप्रकाश सपुत भन्छन् : म र्छु जस्तो लागेको थियो तर बाँचे